Ronaldo Nazário Oo Si Cad U Sheegay Halka Sabab Ee Dhabta Ah Ee Aanu Lionel Messi Kaga Bixi Karin Barcelona. - Gool24.Net
Ronaldo Nazário Oo Si Cad U Sheegay Halka Sabab Ee Dhabta Ah Ee Aanu Lionel Messi Kaga Bixi Karin Barcelona.
Halyayga reer Brazil ee Ronaldo Nazário ayaa soo bandhigay halka sabab ee dhabta ah ee aanu Lionel Messi xagaagan kaga bixi karin kooxdiisa Barcelona.
Ronaldo Nazário ayaa aaminsan in dhibaatada dhaqaale ee xagaagan ka jirta kubbada cagta Yurub ay noqon doonto sababta dhabta ah ee aanu Lionel Messi ku heli karin koox bixin karta lacagta ay Barca ku iibin karto wuxuuna nasiib daro ku tilmaamay in Messi uu ku fikirayo in uu baxo.
Kadib dhibaatada uu abuuray karoona fayras waxay kooxaha waa wayn ee Yurub xagaagan ka fikirayaan in ayna lacago badan suuqa galin karin waxaana socda qorshayaal lagu doonayo in suuqa loo badalo ciyaartoy laysku badasho.
Ronaldo Nazário oo soo bandhiga sababta dhabta ah ee aanu Messi kaga bixi karin kooxdiisa Barcelona xili suuqan ayaa yidhi: “Waa nasiib daro in Messi uu ka baxayo Barcelona, gaar ahaan dhibaatada dhaqaale ee Yurub”.
Ronaldo oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Messi waa astaanta ama tixraaca kooxda, haddii aan Barcelona joogi lahaa, marnaba isaga umaan ogolaadeen in uu xaalad kasta ku baxo”.
Ronaldo Nazário oo xidhiidhka Messi iyo Barcelona ka hadlaya ayaa yidhi: “Messi waxa uu xidhiidh xoogan la leeyahay Barcelona, ma filayo anigu in uu isagu joojin doono in uu kooxda jecel yahay. Wuu niyadjabsan yahay dabcan ee qaabka guuldaradii Champions League”.
“Messi waxa uu u baahan yahay in ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin isaga caawiyaan waxaana Barcelona waajib ku ah in ay ka fikiraan wax ka duwan xili ciyaareedka soo socda. Ogolaanshaha ciyaartoygaaga ugu fiicani xal ma aha” ayuu Ronaldo Nazário hadalkiisa ku daray.